I-roller yamandla iyingxenye yeroli eyindilinga eshayela ibhande lokuhambisa noma eliguqula indlela elihamba ngayo. Ingahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili: i-drive drive ne-roller yokuqondisa. I-roller drive iyinto eyinhloko yokudlulisa amandla. Iroli yamandla okushayela ihlukaniswe yaba iroli yamandla eyodwa (i-angle yokugoqa ibhande ku-roller yamandla ingaphansi kuka-200 ° kuya ku-230 °), iroli yamandla amaningi (esetshenziselwa amandla aphezulu) ne-roller engu-double (i-angle yokugoqa ifika ku 350 °). Kuyadingeka ...
Incazelo yomkhiqizo wochungechunge lwe-rolling roller: ilungele ukuhambisa zonke izinhlobo zamabhokisi, izikhwama, ama-pallet, njll. Izinto zokwakha eziningi, izindatshana ezincane noma ama-athikili angajwayelekile adinga ukuhanjiswa kuma-pallets noma amabhokisi entengo. Ingahambisa impahla eyodwa esindayo noma ithwale umthwalo omkhulu womthelela. Isakhiwo: ngokuya ngemodi yokushayela, ingahlukaniswa yaba umugqa wamandla kagesi ne-non-roller roller line, ngokuya ngesakhiwo, ingahlukaniswa yaba umugqa wokuhambisa i-roller ovundlile, othambekele koku ...
Ukukhiqizwa kwe-roller eyisikwele ikakhulu kuqukethe ukujika kokuqala komzimba we-roller, ukulinganisa kwe-static kokuqala, ukuphazamiseka kufaneleka nokushisela kwekhanda le-shaft, ukujika okuhle nokulinganisa okuhle okunamandla. Uma ukubekezelelana kokuziphatha, njengokuzungeza, i-cylindricity nokuqonde ngqo, kudingeka kube ngaphansi kuka-0.2mm, i-grind cylindrical ephezulu noma i-roll grinder iyadingeka ukuthi igaye ngemuva kokuqeda. Uma kudingeka ubulukhuni bendawo, inqubo yokwelashwa kokushisa kufanele ingezwe. Ngemuva kokuthi i-roller is ...
Insimbi engagqwali roller elihambayo futhi umshini sigubhu turning babe izinzuzo isakhiwo esilula, ukuthembeka okuphezulu kanye nokugcinwa elula. Le misebenzi ingakulethela izinzuzo ezinkulu zebhizinisi, ukuqonda umsebenzi wayo othize. Umugqa we-roller usetshenziselwa ukuxhumana okulula nokuhlunga phakathi kwama-conveyors. Ingakha uhlelo lokuhamba lwezinto eziyinkimbinkimbi olunemigqa eminingi yama-roller neminye imishini yokudlulisa noma imishini ekhethekile ukuhlangabezana nezidingo zenqubo ezahlukahlukene. Isitaki ro ...
Imodeli yokusetshenziswa iphathelene ne-roller epulasitiki, equkethe isilinda, ikhava yokuphela, i-roller shaft, ukuqeda umsindo nomshini wokuvikela ukushisa kanye nedivayisi yokukhipha ugesi. I-roller shaft i-cylindrical, i-cylinder ingu-cylindrical, i-cylinder isongwe ohlangothini olungaphandle lwe-roller shaft, izembozo zokuphela zihlelwe kuzo zombili iziphetho zesilinda, izakhiwo zangaphakathi zamakhava wokugcina emikhawulweni yomibili ziyafana, ama-bearings alungisiwe ngaphakathi kokuthwala ...